ထိပ်တန်း 10 Android ကိုကာစီနိုဂိမ်း - အကောင်းဆုံး Android ကိုအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ထိပ်တန်းကာစီနိုဂိမ်း 10 အန်းဒရွိုက် - အကောင်းဆုံး Android ကိုအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ
(985 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... အဆိုပါက Android operating system ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်နေရာအနှံ့ OS ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ကို Apple IOS ကိုသို့မဟုတ်အခြား operating ပလက်ဖောင်းပေါ်ထက်က Android ပေါ်မှာ run ။ ဒါကြောင့်သာမတ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံပိုင်ရှင်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကိုသင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Android ကိုလောင်းကစားရုံ app များကိုဖန်တီးမယ်လို့သဘာဝကျပါတယ်။ သူတို့ကပရီမီယံမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံနေရာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အရည်အသွေးမြင့်မိုဘိုင်းလောင်းကစားဝိုင်း software ကိုပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူပူးပေါင်းပါပွီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဲဒီကို virtual ဂတ်စ်ဟာယပူဇော်သက္ကာကို Android ရဲ့ 3.2 Honeycomb operating system ကိုသို့မဟုတ်အသစ်များ running ဆိုစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာသုံးစွဲနိုင်ကြသည်။ ယနေ့၏နည်းပညာကိုသင် 4.30 တစ် 480 လက်မအရွယ် touchscreen နှင့် resolution နဲ့တစ်ဦးကို Samsung က Galaxy S II ကိုအသုံးပြုနေသည်ရှိမရှိ 800 pixels ကို x, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး 4.70 လက်မ display နှင့် 1,080 ၏ Full HD ကို resolution ကိုကာမဂုဏ်တစ်ဦးက HTC One ဟန်းဆက် 1,920 pixels ကို x အကြောင်း, သငျသညျလကျခံရရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ် သင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက်ဿုံချပ်တစ် user interface ကို။ အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာရရှိထားသူကြောင်းလွှမ်းမိုးမှုကိုရှိနေခြင်းနှင့်အတူ, အန်းဒရွိုက်လောင်းကစားဝိုင်း apps များနှင့်မိုဘိုင်း optimized လောင်းကစားဆိုဒ်များအရပ်၌ရှိပြီးသားအနေနဲ့ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ဤရွေ့ကား, လောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်း၏, ဒါပေမယ့်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအလောင်းအစားကို Android အားကစားဘို့မသာမှန်သည်။
ထိပ်တန်း 10 Android ကိုကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အဆိုပါ Neilsen မိုဘိုင်းစားသုံးသူအစီရင်ခံစာအဆိုအရအမေရိကန်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် 20% အားဖြင့်မိုဘိုင်း application များကျော်မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်း optimized ဝက်ဘ်ဆိုက်များဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့မိုဘိုင်း application များထက် ပို. လူကြိုက်များကြသည်။
သငျသညျသင့် hard-ရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံချ plunk မတိုင်မီသင်သည်သင်၏ Android ကို PC မှာ, စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာလောင်းကစားကြသည်ဖြစ်စေ, အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုဘယ်လိုပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အင်တာနက်လောင်းကစားရုံရူပ, သင်ဆဲတစ်ဦးကယျြပွနျ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖျော်ဖြေသငျ့သညျ။ ကို Android operating system ကိုတစ်ဦးအမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် OS ကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအံ့သြဖွယ်အရာဖြစ်၏။ သူတို့သည်သင်၏ device ကိုဖန်တီးတဲ့အခါဒီ developer များနှင့်မိုဘိုင်း device ကိုထုတ်လုပ်သူအဆုံးမဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နိုင်ခြေခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လည်းထွက်အဲဒီမှာကို virtual ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားအပွားအခမဲ့အန်းဒရွိုက်လောင်းကစားရုံ apps များအချို့ကိုဖြစ်စေသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာအလွန်ကောင်းမဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမှုးမတ်အတွေ့အကြုံကိုထက်လျော့နည်းကမ်းလှမ်းကြသူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့။ ဆိုလိုတယ် အင်တာနက်ကိုတစ်ဦးအလွန်ကျယ်ပြန် entity ဖြစ်ပြီး, သငျသညျကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်သည့်မသမာတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့် run မတော်မတရားက်ဘ်ဆိုက်များနေဆဲရှိပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ကြောင်းပြုပါအတိအကျဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကြုံတွေ့ရအများစုမှာ Android ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံကျနော်တို့အကြံပြုအထူးသဖြင့်သူများ, အတက်ပေါ်နှင့်တက်နေသည်။ သူတို့ကမြန်ဆန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဂိမ်းများတစ်အံ့သြစရာရွေးချယ်ရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုကွပ်မျက်ကိုဆက်ကပ်။ သင်တို့မူကားအလိုအလျှောက်ဤဖြစ်ရပ်မှန်ကန်ယူဆဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ ကျနော်တို့သင်အသုံးပြုနေတဲ့ကို Android လောင်းကစားရုံ apps များကိုအကောင်းဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျယ်ကျယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အနည်းငယ်ဒေသများရှိပါသည်သောအွန်လိုင်းလောင်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ခဲယဉ်းလမ်းသင်ယူကြသည်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စစ်ဆင်ရေးကိုလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဘယ်မှာသင်အမြဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သငျ့သညျ။ သငျသညျလညျးဤကွန်ပျူတာအတွေ့အကြုံကတည်းကတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံသင့်မိုဘိုင်း device ကိုမှသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ရဖို့ကိုအသုံးပြုသည်ဆော့ဖ်ဝဲအလွန်အရေးပါသည်ကိုနားလည်သင့်တယ်။ သင်တစ်ဦးအမေရိကန်ကစားသမားများမှာဆိုလျှင်, သင်အသုံးပြုနေတဲ့နေသောလောင်းကစားရုံ, အမေရိကန်ကစားသမားကို support ဘဏ်လုပ်ငန်းရွေးချယ်စရာစူးစမ်းဖို့လိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ၏ဖြစ်ကောင်းအရေးအပါဆုံးကြောင်းသိရန်လိုအပ်ပါနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် website တစ်ခု၏လုံခြုံရေး protocol များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လိုင်စင်အရာမှာ, Kahnawake, ကနေဒါနှင့်ဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်များ၏ Mohawk အဘိဓါန်နယ်မြေတွေကိုရုံနှစျခုအများအားဖြင့်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်ကြ၏ပိုမိုလေးစားခြင်းနှင့်တရားဝင်လိုင်စင်တရားစီရင်မှု၏ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်မှာအချက်အလက်အမေးအဖြေများပေါ်တွင်သို့မဟုတ် website တစ်ခု၏ကြှနျုပျတို့ကိုဧရိယာအကြောင်း, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးကူညီမှုအသင်းနှင့်အတူ chatting တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့တိုင်, သငျသညျနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ရှေ့တော်၌ကုမ္ပဏီသုံးသပ်လူသိများသည့်တရားစီရင်မှုသိရန်ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့အချို့အခြားသူများထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အန်းဒရွိုက် access ကိုနှင့်အတူအင်တာနက်လောင်းကစားရုံစာရင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုမီ, ငါတို့ဥပဒေရေးရာလက်မှတ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးသမာဓိအဆင့်မြင့်နှင့်အတူတရားစီရင်မှုလိုင်စင်မှလာအာမခံပါသည်။
ကျနော်တို့ရှာနောက်တစ်နေ့ဝိသေသကို Android အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံထောက်ပံ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂိမ်းဆော့ဖျဝဲနေတဲ့အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ကိုလောင်းကစားရုံကမ်းလှမ်းမှု apps ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ website တစ်ခုသည်အခြားလမ်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော်လည်း, သူတို့သည်ဆင်းရဲသောသူကိုသို့မဟုတ်စိတ်မချရဆော့ဖျဝဲကိုအသုံးပြုဖို့လျှင်, သင်သည်တာရှည်အဘို့ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဆဲလျှံအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော interface ကိုပို့ဆောင်စဉ်အကြီးဆုံးတိုးတက်သောထီပေါက်ဆုကြေးငွေနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များလက်ရှိအချိန်ဂိမ်း (ထိုင်းအစိုးရက), Microgaming နှင့်အနည်းငယ်အခြားသူတွေဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ထိုင်းအစိုးရကသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ software ကိုလွတ်လပ်သော Third-party ဂိမ်းဓာတ်ခွဲခန်းများ၏လက်မှာခြင်းကိုသည်းခံမကြာခဏနှင့်ကျပန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက်လူသိများသည်။ ဒါဟာတရားမျှတတဲ့ကစားများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသေချာ, နှင့်ထိုင်းအစိုးရကကျပန်းနံပါတ်တစ်ခုမီးစက် (RNGs) နောကျကို virtual ကစားကဒ်သို့မဟုတ်အန်စာတုံးလိပ်ကျပန်းအာမခံနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာမကြာခဏစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကယ်နှုတ်တော်မူလေ့ရှိသည်။ အဖြစ်ဝေးအတွေ့အကြုံတတ်သကဲ့သို့, ဗွီဒီယိုနဲ့အသံပေးပို့ချောမွေ့စွာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပြီး, ပိုမိုလူကြိုက်များထိုင်းအစိုးရကတိုးတက်သောလောင်းကစားရုံဂိမ်းအများအပြားမကြာခဏခြောက်ပင်ခုနစ်ခုကိန်းဂဏန်း paydays ကယ်နှုတ်တော်မူ။
site တစ်ခုအမေရိကန်ကစားသမားကိုထောက်ပံ့ခြင်းရှိမရှိရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအလုံအလောက်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကြှနျုပျတို့၏ website တွင်သင်သည်အမြဲသင်ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးအမေရိကန်အလံ icon ကိုရှာလျှင်အမေရိကန်ကစားသမားကိုပံ့ပိုးသောအင်တာနက်လောင်းကစားရုံရောက်ရှိသိရကြလိမ့်မည်။ သင်ဤဝေးလာကြပြီပြီးတာနဲ့သင်ဖြစ်နိုင်သင်နှစ်သက်တဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနဲ့အထူးသဖြင့် Android မှာမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံမှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အလိုရှိ၏။ ပို. ပို. တရားဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုသင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်သင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်ဘဏ်နှင့်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့, အများအပြားက e-ပိုက်ဆံအိတ်နည်းလမ်းများမကြာခဏရရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်,, လုံခြုံရေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့အပေါ်စီစဉ်နေကြသည်ကို Android လောင်းကစားရုံဂိမ်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပေးရန် 128 နည်းနည်း SSL ကိုဒေတာ encryption ကိုလုံခြုံရေးနိမ့်ဆုံး employ ဘူးဆိုရငျ, သင်တို့အပေါ်မှာရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကအဓိကဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုသုံးပါသောအနည်းဆုံးအဆင့်ကိုဖြစ်တယ်, သင်သည်သင်၏ Android ကိုလောင်းကစားရုံဂိမ်း app ကိုကနေလျော့နည်းဘာမျှမမျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကျနော်တို့ကျယ်ကျယ်အားလုံး Android ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံပြန်လည်သုံးသပ်ရှိရာအရေးပါသောဒေသများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့အကြံပြုဘယ် website မဆိုသို့မဟုတ် application ကိုပျံသန်းသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူဤအစမ်းသပ်မှုလွန်ပြီ။
0.1 ထိပ်တန်း 10 Android ကိုကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း